Baarlamaanka Poland oo Ansixiyay Sharciga Cusub oo Quseeya Qaxootiga Wadankaasi ka gudbaya
HomeWararka CaalamkaBaarlamaanka Poland oo Ansixiyay Sharciga Cusub oo Quseeya Qaxootiga Wadankaasi ka gudbaya
October 3, 2021 Wararka Caalamka, Wararka Maanta Somaliska 0
Baarlamaanka Poland ayaa u codeeyay in la kordhiyo xaaladda degdegga ah ee ka jirta xadka Belarus. Shaqaalaha gargaarka iyo saxafiyiinta ayaan weli gaari karin muhaajiriinta sii wada inay isugu yimaadaan xadka – ugu yaraan shan muhaajiriin ah ayaa halkaas ku dhintay toddobaadyadii la soo dhaafay.
Xaalad degdeg ah oo durba dhaqan gashay muddo hal bil ah oo ku aadan xadka bari ee Poland la leedahay Belarus .
Talaadadii, Madaxweynaha Poland Andrzej Duda ayaa ku baaqay in xaaladda degdegga ah la kordhiyo 60 maalmood . “Nasiib darro, cadaadiska xuduudda ayaa sii kordhaya,” ayuu yiri.
Sida laga soo xigtay ilaalada xadka Poland, in ka badan 8,200 oo muhaajiriin ah ayaa laga hor istaagay inay ka soo gudbaan xadka Belarus tan iyo bilowgii bishii Ogosto. 1,200 kale ayaa u suurtagashay inay galaan Poland waxaana lagu xiray xeryo xiran.